Nanentana ny UE hampitsahatra ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpiasa Alitalia
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Nanentana ny UE hampitsahatra ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpiasa Alitalia
Airlines • Airport • Associations News • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany Italia • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Manameloka tanteraka ny ETF ny zava-misy fa tsy nandinika ny zon'ny mpiasa ara-dalàna ny Vaomiera Eoropeana eo ambanin'ny Andry Andry zon'olombelona.
ITA dia nanome jiro maitso handraisana anjara amin'ny asan'ny Alitalia.
Ny fanapahan-kevitra dia fanitsakitsahana goavambe ny fifanarahana fifampiraharahana iraisana, hoy ny sendika.
Misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ny olona 11,000 ny fanapahan-kevitry ny komisiona.
Ny Federasiona Mpiasa momba ny fitaterana eropeana dia manameloka mafy ny fehin-kevitra navoakan'ny Vaomiera eropeana androany momba ny raharaha Alitalia / Italia Trasporto Aereo SpA (ITA) izay manome ny jiro maitso ho an'ny orinasa vaovao, ITA, handray ny ampahany amin'ny asan'i Alitalia.
Gaga izahay fa afaka nanao izany mora foana ny vaomiera eropeana ary tsy nisy fiheverana ny zon'ny mpiasa nandray izany fanapahan-kevitra izany. Raha ny hevitray dia kapoka mafy izany ary fanitsakitsahana goavambe ny fifanarahana fifampiraharahana ara-dalàna misy any Italia, manapoaka ny ezaka mafy ataon'ny sendika italiana sy ny mpampiasa amin'ny fifampiraharahana amin'ny fifanarahana asa vaovao. Fa kosa, ny toeran'ny EC ankehitriny dia mampiroborobo ny fifanarahana asa vaovao sy mety hampidi-doza. Ny komisiona dia voatarika mazava amin'ny fahombiazan'ny vidiny ary manao izany amin'ny fandaniana ny fiaramanidina maharitra, indrindra ny fiaramanidina maharitra maharitra.
Livia Spera, sekretera jeneralin'ny ETF dia nanambara:
Famelezana tampoka ho an'ny mpiasan'ny Alitalia, ny fianakaviany ary ny sendikàn'izy ireo izany. Ny fanapahan-kevitry ny Vaomiera dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ny olona 11,000 mahery sy ny fianakaviany ary ny fampiasana kabary toy izany dia sady manafintohina no manala ny ahiahin'izy ireo. Ho firaisankina amin'ireo mpiara-miasa amintsika izay naneho fihetsiketsehana manohitra ity fomba tsy ara-drariny sy tsy maharitra ity dia miantso ny Vaomiera eropeana aho mba hamerina ny fanambarany ary handinika indray ny tanjon'ity fankatoavana fanampiana amin'ny fanjakana ity, izay tsy manohana indostrian'ny fiaramanidina maharitra, ary tsy manohana ny mponina any Eropa.
Fanampin'izany, ny ETF dia manameloka mafy ny zava-misy fa ny komisiona eropeana dia tsy nandinika ny zon'ny mpiasa ara-dalàna eo ambanin'ny Andry Andry zon-tsosialy, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny fitsipiky ny asa azo antoka sy azo ampifanarahana ary ny fifanakalozan-kevitra ara-tsosialy. Ambonin'izany, ny ETF dia manintona ny saina fa ny EC dia tsy miraharaha ny fikasana hiaro ny fifanarahana asa ataon'ny mpiasa horaisin'ilay mpitatitra vaovao, ITA.
Ny ETF dia manohana tanteraka ny mpiasa italiana Alitalia mitokona anio, amin'ny ezak'izy ireo hanokatra indray ny fifampiraharahana amin'ny mpampiasa vaovao, ITA. Tokony hatao amin'ny fanajana tanteraka ny lalàna italiana izany, ary ny fanekena ny zon'ny fifampiraharahana iraisana eo amin'ny sehatra nasionaly.